I-TV kunye neFilimu IiKomidi
Ezi zindaba zibonisa into eninzi malunga nomntu osemva kokwakheka
I-Krusty iClown yi-clown ekhethiweyo, ekhethiweyo kunye ne-pacemaker kwi-Simpsons. Uyakubonisa umboniso wezingane zakhe, u-Bart abukela ngokuthembeka. Yintoni eyenza i-Krusty hilarious kukuba ngumntu wokugqibela omele abe ngumntwana wekontra. Kule minyaka sifunde kakhulu ngeKrusty iClown. Ungumntu omangalisayo, kwaye ezi zizona ziqendu.
'I-Krusty Ifumana I-Busted'
Kwisihlandlo sokuqala se -Simpsons , siya kukhangeleka kwiindawo ezibonakalayo ze -Krusty iClown Show , kwaye ayiyinto enhle. AmaNgqina kaHomer ukuphanga kwi-Kwik E Mart kwaye achaza uKrusty njengelaphu. Emva kokuba uKrusty enetyala, uBab noLisa baphando lolwaphulo-mthetho, kuphela ukuba bafumene uKrusty babengeke babambe ivenkile. Ividiyo yokukhusela ibonisa i-Krusty isebenzisa i-microwave, kodwa uKrusty akayi kwenza oko kuba ubeka i-pacemaker. Ngaphezu koko, uKrusty akayi kufunda kwiphephancwadi ngenxa yokungafundi. Ekugqibeleni, uHomere wangena ngephanyazi kwiinyawo ezinzima ngexesha lokuphanga. Kodwa u-Bart uyaziqonda uSideshow uBob, onamagqabi amakhulu, nguye umgwenxa ngenxa yokuba uKrusty unxiba izihlangu ezinkulu kodwa unamanqina aqhelekileyo. Umhla wokuqala womoya: Aprili 29, 1990.
Intetho ethi: UBart uthi, "uKrusty wayembethe izicathulo ezinkulu, kodwa unezinyawo ezinjengezo zonke iintliziyo ezintle."
KwiSimpson yentsapho yokudla, uKrusty ubonakalisa igama lakhe langempela nguHerschel Krustofski, kwaye akayena nje kuphela ongumYuda kodwa naye akadabulwanga kubazali bakhe, uRabi Krustofski. UBat noLisa bacela uRabi ukuba axolelane noKrusty, kuphela ukuba ahlwaywe. Xa uBill ecaphula ngokucacileyo uYewe Ndingakwazi nguSammy Davis, Jr., uRabi Krustofski ugqiba ukuvuma ukubona unyana wakhe. Inkwenkwezi yeendwendwe: uJacki Mason. Umhla wokuqala womoya: Oktobha 24, 1991.
Ukuthandana okuthandayo: ULisa uthi, "Indoda enomona yintsapho yindoda efuna uncedo.
Kamp Krusty. Ikhulu lama-25 leminyaka
Asiboni i-Krusty eninzi kule ngqungquthela, kodwa yile ngongoma. UBot ugqiba ukuqonda iphupha lakhe lokuya kwiKam Krusty, kuphela ukufumana inkampu. Iintsana zondla i-gruel imitation, zisebenza kwaye ziphoqelelwe ukuba zenze iziqholo eziyingozi. Xa uMnu Black ezama ukugqithisa uBarney njengoKrusty, uBart ukhokelela ekuvukeleni. Ekugqibeleni, uKrusty ubonisa kwaye, ngokulila, uxolisa kubantwana. Emva koko uwathatha bonke baya eThujuana. Umhla wokuqala womoya: Sept. 24, 1992.
ULisa : "Ndivakalelwa kukuba ndiza kufa, uBot."
UBot: "Sonke siya kufa, Lis."
ULisa: "Ndithetha ngokukhawuleza."
UBot: "Kwakhona mna.
'UKrusty Ufumana Ukukhishwa'
Imbonakalo yeKrusty ikhanseliwe xa i-ventriloquist kunye ne-dummy yakhe, uGabbo, beba i-TV ye-Krusty ye-TV. UBot noLisa bamfumana bengenamakhaya kwaye banqwenela ukunceda. Intsapho iyamngenisa ngelixa ibuyela kwakhona. Emva koko uBot uyangena kwi studio ngeli gama uGabbo uthabatha aze aphendule ikhamera, eyenza uGabbo uthethe izinto ezimbi malunga nabaphulaphuli. NjengoGabbo, uKrusty kunye nabantwana bahlanganisa i-TV ekhethekileyo, eneenkwenkwezi zeBette Midler, i-Red Hot Chili Peppers, uHugh Hefner, uJohnny Carson noLuka Perry. Eyona nto ikhethekileyo yintlanzi kwaye uKrusty ufumana umbukiso wakhe. Ienkwenkwezi zeendwendwe: Iinkwenkwezi njengabo. Umhla wokuqala womoya: ngoMeyi 13, 1993.
Inqaku lokuthandayo: U- Krusty uthi, "Iminyaka engamashumi amathathu anesihlanu ekuboniseni ishishini, kwaye kakade akukho mntu undikhumbulayo." Njengokuba yiyiphi igama lakhe kunye nabani-kwaye kwaye, niyazi, lo mntu, owayehlala ephethe ihembe. "
Ukuze ahlawule izikweletu zakhe zokugembula, uKrusty uvula iikholeji yeclown. Homer ubona ibhodi yebhanki ivakalisa isikolo sikaKrusty kwaye ibonakalisa. Uphumelela kwikholeji ye-clown, nangona akakwazi ukwenza i-Spin Cycle Fantastic iqhinga. Abantu bonke ngaphaya kwe-Springfield bampalela i-Krusty yangempela, kuquka uFat Tony. UHomer uthunjwa aze athathwe kuDon Vittorio ukuhlawula ityala leKriv U-Don Vittorio uthi uya kusindisa ubomi bukaHomer ukuba wenza i-Spin Cycle Fantastique. U-Krusty ubonisa ngexesha lokuqhuba inkohliso noHomer, kunye noDon Vittorio abakhulula ubomi babo. Inkwenkwezi yeendwendwe: uJoe Mantegna njengoFat Tony. Umhla wokuqala womoya: Feb. 12, 1995.
Umdlalo oyintandokazi: Ngethuba lokuqala uHomer ezama i-Spin Cycle Fantastique kaDon Vittorio, ibhulukwe zakhe zibanjwe kwivili lesithuthuthu, zinyamalalala kude kube yilapho zonke ezishiywe yi-Homer yangemva
'Isivivinyo sokugqibela sikaKrust'
Iibhola ze-Krusty kwi-benefit comedy enkulu e-Springfield. Amahlaya akhe aphelelwe yisikhathi kwaye ahlasele. Uhamba kwi-bender kunye nemimoya kwi-front yard Flanders. UBot uyamngenisa aze akhombise uJay Leno ukuba aqeqeshe uKrusty. U-Krusty akasakwazi ukuhlaziya izinto zakhe kwaye uyahamba ngokuya kumdlalo wamanje. Ukuphawula kwakhe okungalunganga kukuhlaselwa. Yenza ukuba kubuyiswe njengomdlalo wokuhlaziya, ukuxelela ukuba kunjalo. Kude, oko kukuthi, unikwe itoni yemali ukuxhasa iCanyonero. UKrusty ubuyela ekuthengiseni. Ienkwenkwezi zeendwendwe: uSteven Wright, uJaneane Garofalo, uBobcat Goldthwait, uBruce Baum, uJay Leno kunye noHank Williams, uJr. Umoya wokuqala womoya: Feb. 22, 1998.
Todd Flanders: "Wow, i-clown! Ngaba ucinga ukuba uyingozi?"
I-Rod Flanders: "Uthukuthela ububi."
Kwisayine incwadi, intombazana egama linguSophie utshela uKrusty ukuba nguyise. UKrusty uthatha intombazana enxwemeni ukuze idibene. Ekushoneni kwelanga, udlala i-violin kuye. Kamva, uKrusty ulahlekelwa ngu-Sophie violin ngexesha lomdlalo we-poker kunye noFat Tony. Xa uSophie efumanisa, uyaqonda ukuba ubhetele ngokungazi. U-Krusty uziva ekhohlakele kwaye uqinisekisa uHomer ukuba amncede aphinde aphinde aphinde aphinde aphinde aphephe i-violin. Ziyaphumelela, kodwa i-Homer imimoya ebalekela kwixhoba. Ienkwenkwezi zeendwendwe: uJoe Mantegna njengeFat Tony; Drew Barrymore njengoSophie. Umhla wokuqala womoya: Novemba 12, 2000.
Inqaku lokuthanda: U- Sophie uthi, "Uyazi, ngenxa yeclown, awuyiyo yonwabe kakhulu."
'Mr. Spritz Uya eWashington
Intsapho yaseSimpson inceda iKrusty ukuba ikhethwe, kuba iinjongo zazo zokubuyela kwindlela yokuhamba kwesikhuphelo. Emva kokuba uKrusty ukhethwe, ngokukhawuleza uyaxhatshazwa yinkqubo. Akukho mntu uya kumphulaphula malunga nokuhamba kwendlela yokuhamba. I-Simpsons ifumana i-Krusty kwibha kwaye yenza isigqibo sokucela uncedo lomgcini we-congressional kwi-mail kunye nokukhohlisa ibhilikhwe yayo ukuba idlule. Ekugqibeleni, uLacclips uhambo lwawo lwendlela yokuhamba kwinqanaba lomnye kwaye ludlula. Umhla wokuqala womoya: Matshi 9, 2003.
Ukuthandana okuthandayo: U- Krusty uthi, "Ndifungela ukuxhasa nokukhusela uMgaqo-siseko we-United States. Ngoko ke phumula, iisundu zamadundu, andinakukuchaphazela!"
U-Krusty ufumanisa ukuba akanakho inkwenkwezi kwi-Walk of Fame yamaYuda kuba akazange abe ne-bar mitzvah. Uyise, uRabi Krustofski, uchaza ukuba wayengenayo kuba akazange athathe izifundo zakhe zobuYuda. UKrusty ukhetha ukwenza oko kufuneka kwenziwe, okubandakanya ukungabonakali kwakhe umboniso ngeSabatha. Ukhetha uHomer ukuba athabathe njengommwendwe, ucinga ukuba uHomer uya kubhobhoza aze agcine umsebenzi wakhe ukhuselekile. Kodwa uHomer wahlaselwa kwaye uKrusty uxoshwa. Uqinisekisa uFox ukuba akhuphe i-Wet 'n' Wild Bar Mitzvah ukuze akwazi ukubuyela. Ngelo xesha, uLisa uqinisekisa uHomer ukuba asebenzise i-TV yakhe yesigxina ukuthetha ngezinto ezibalulekileyo. Ngokukhawuleza xa uHomer ethatha isiluleko sikaLisa, uyasuswa. Ngenxa yokuba i-Krusty ekhethekileyo yintsikelelo, uqeshe ukuba abuyisele umboniso wakhe. Noko ke, uyise, wayedumala kukuba uKrusty wayengenalo i-bar mitzvah yangempela. UKrusty uyavuma kwaye aphefumula ngokuphindaphinda iTalmud ngokupheleleyo ethempelini. Inkwenkwezi yeendwendwe: uJackie Mason njengoRabi Krustofski. Umhla wokuqala womoya: umhla wama-7, 2003.
Isinqumo sikaKrusty sokuthatha umhlalaphantsi emva kokuba esicasulwe ngetekisi yekhamera yetshizi yakhe inemiphumo emibi ngoyise, onesifo senhliziyo aze afe. Umhla wokuqala womoya: Septemba 28, 2014.
"Tina, unqatha!" I-Funniest 'Napoleon Dynamite' Iimvoti zeMifanekiso
I-French Top Listening Exercises